Ogaden News Agency (ONA) – Jigjiga oo ka goa’n dalka intiisii kale iyo calooshood u shaqaysataaysha Cabdi ilay oo ku gadooday magaalada – Noora Afgab
Jigjiga oo ka goa’n dalka intiisii kale iyo calooshood u shaqaysataaysha Cabdi ilay oo ku gadooday magaalada – Noora Afgab
Magaalada jigjiga oo markii horeba culeeys badani haystay ay ka mid yihiin biyo la’aan, gaadiid la’aan iyo busaarad xoog badan ayaa waxaa kaga soo kordhay culays kale diyaar garawga waxan ay ugu yeedhaan xuska Hidhaar. Waxaa lasii toban jibaaray xadhiga aan macnaha ku fadhiyin, sidoo kale waxaa la kordhiyay xanibaada isu socodka. Waxaa la sameeyey goobo iyo wadooyin aan habayareetee lamari karin, kuwo aan maalintii niska danbe iyo habeenkii lamari karin iyo kuwo si taxadarleh ay tahay in loo maro. Wadooyinka waaweyn ee soo gala xafiiska Cabdi iley ayaa gabi ahaanba la xidhay laguna xidhay dhismo ka samaysan sibidh iyo dhagax, wadooyinka laamida ah ee kale ayaa iyagana laga manuucay dhamaan gaadiidka kala duwan kolka laga reebo kuwa ciidanka iyo lugta dadweynaha. Baabuurta ayaa mara wadooyinka fiidaha magaalada la war wareega waana arin dhibaato ku noqotay isu socodka dadadka iyo Gadiidka.
Sawirkan idiin muuqada waa ciidamada ilay oo garacay Bajajle waxana qabatay Camerada ONA
Dhinaca kale ardayda wax ka dhigata dugsiyada magaalada Jigjiga ayaa waxay aad uga cabanayaan waxbarasho xumo ka dib markii macalimiintii wax u dhigeeysay badankoodii lagu qoray arimaha nabadgalyo ilaalinta iyo roonteeynta xaafadaha. Macalimiintan ayaa waxaa la faray ilaa inta 29hidhaar laga gaadhayo in ayna wax kale qabanin. Waxaa kale ooy ardaydu ka cabanayaan inkasta oyna jirin cid aay u cawdaan baadhitaan iyo xanibaad aan kala go’ iyo hakad toona lahaayn.
Guud ahaan dhibaatadan ardayda haysata ayaan ahaayn mid ku kooban magaalada jigjiga kaliya ee waa mid guud ahaan degaanka oo dhan kataagan sababtoo ah meesha heeganka lagaga jiraa maaha oo kaliya jigjiga ee waxaa laqaba dhamaan degmooyinka iyo gobolada uu degaanku ka kooban yahay.
Noora Afgaab / Jigjiga ogadeniya
wuu mahadsanyahay wariya ona way iska dhamaan gabgabtu guushuna iyada ayaa imaan